कम्युनिष्टले नै राजा फिर्ता ल्याएकाे कम्वाेडियाबाट प्रधानमन्त्रीले के सिक्लान ? – www.agnijwala.com
कम्युनिष्टले नै राजा फिर्ता ल्याएकाे कम्वाेडियाबाट प्रधानमन्त्रीले के सिक्लान ?
कुरो हो नेपालका प्रधानमन्त्रीको कम्वाेडिया भ्रमणको कम्वाेडियामा हटाइएका राजालाइ जनताकाे बलमा पुन फिर्ता गरेकाे १५ बर्ष पुगेकाे छ। र राजा नराेद्धम सिंहामाेनीकाे उमेर ६६ बर्ष मंगलवार ठयाक्क पुगेकाे छ।कम्वाेडियामा राजाकाे जन्माेत्सव तिन दिनसम्म भब्य रूपमा मनाउने चलन छ। यस्ताे बेलामा जम्वाे टाेली सहित प्रधानमन्त्री केपी अेाली कम्वाेडिया भ्रमणमा रहेका छन।कम्युनिष्टले नै राजा ल्याएकाे इतिहास भएकाे कम्वाेडिया पुगेर प्रधानमन्त्रीले के सिक्लान त ?
त्याे त्यही कम्वाेडिया हाे,जहाँ तानाशाह पाेलपाेटले हजाराैं मानिसकाे बलि दिएका थिए।उनले यसरी मानिसकाे सामुहिक हतया गरेकैले उनलाइ कम्युनिष्ट तानाशाह भनिन्छ।पाेलपाेटले हत्या गरेका हजाराैं मानिसकाे मानव खप्पर अहिले पनि त्यहा सजाएर राखिएकाे छ।याे चिहान हेरेर मानिसहरू पाेलपाेट कतिसम्म क्रर थिए भनेर अनुमान गर्न सक्छन।
यस्ताे बेलामा प्रधानमन्त्री कम्वाेडिया भ्रमणमा छन।र,उनले नेपालमा यो देशकाे भ्रमणबाट के पाठ सिक्नेछन हाेला त ? यो सवाल खडा भएकाे छ।